रुपाको ‘फक्रिए’को रुप, आउँछन् यस्ता प्रस्ताव ? - Dainik Nepal
रुपाको ‘फक्रिए’को रुप, आउँछन् यस्ता प्रस्ताव ?
दैनिक नेपाल २०७४ पुष १६ गते १२:३४
काठमाडौं । सानैदेखि नृत्य र अभिनय गर्न रुचाउने रुपा लामा अहिले आएर मोडलिङमा राम्रोसँग काम गर्दै छिन् । झण्ड दुई वर्षदेखि मोडलिङमा सक्रिय रहेकी रुपमाले सानो व्यनारका फिल्महरू खेलेकी छिन् ।
अभिनय र नृत्युमा उत्तिकै दख्ल राख्ने रुपा भन्छिन्, ‘अभिनय र नृत्यसम्बन्धी औपचारिक ज्ञान कतैबाट लिएकी छैन । तर, सानैदेखि स्कूलमा सिकेको अभनुभव र व्यवहारले मलाई मोडलिङमा सहयोग मिलेको छ ।’ सुरुवाती दिनमा सानो व्यानरका फिल्ममा खेलेकी रुपको धोको ठूला ब्यानका फिल्म खेल्ने छ ।
रुपाको डेब्यु फिल्म तामाङ भाषाको ‘दोर्जे हारङवा यला कर्म’ हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ४ सिमपानी रुपाको स्थायी घर हो । कलाकारिताका लागि विगत केही वर्षदेखि उनी काठमाडौंमा बस्दै आएकी छिन् । अहिलेसम्म १५ वटा म्युजिक भिडियोमा उनले अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
बिहेको प्रस्ताव कत्तिको आउँछ ? भन्ने जिज्ञासामा रुपाले भनिन्, ‘किन नआउनु नि आउँछ । खासै ध्यान दिने गरेकी छैन ।’ आफ्नो करियरका लागि पहिला ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रुपाले ‘हाँक्का हाँक्की’ टेलिसिरियलमा यसअघि अभिनय गरेकी थिइन् ।
रुपाले मिस हेरिटेज क्वीन नेपाल २०१७ को उपाधि विजेता पनि हुन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्दै रुपाले उपाधि जितेकी थिइन् ।
राम्रो नृत्य गर्न सक्ने उनी बेलाबेला कार्यक्रमका लागि विदेश र महोत्सवहरूमा जाने गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘अभिनय र नृत्य राम्रो हुने हो भने सबैले बोलाइ हाल्नु हुन्छ नि !’